MD Farmaajo oo cadeeyay in doorashada dalka dhaceysa ay ka duwanaan doonto kuwii hore | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	MD Farmaajo oo cadeeyay in doorashada dalka dhaceysa ay ka duwanaan doonto kuwii hore
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo goordhaw khudbad xasaasi ah ka jeediyay kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka labada aqal ayaa shaaca ka qaaday in doorashada dalka ay ka dhaceyso waqtigii loogu tala galay.
Khudbad Madaxweynaha ayaa daqiiqado dhoor hakad gashay kadib markii qaar kamid ah Xildhibaanada golaha shacabka foodo ka sameeyeen xarunta ay munaasabada ka socoto, hasa ahaatee Khudbada Madaxweynaha ayaana markii dambe si caadi ah loo dhageestay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in doorashada Soomaaliya ay ka dhaceyso dalka xiligii horey loo qorsheeyay, waxa uuna meesha ka saaray shakiga la galinayo in doorashada dalka dib loo dhigayo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa faray Xukuumada in ay ka shaqeyso sidii doorashada si xasilooni ah uga dhici laheyd dalka waqtigii loo qorsheeyay, waxa uuna cadeeyay in doorashada dalka ka dhaceysa ka duwanaan doonto kuwii hore.
”Sida aan la socotaan qaabka doorasho walbo oo dalka ka dhacday waa ay ka duwaneyd tii ka horeeesay, waxaana noo muuqata in doorashadan ka duwanaan doonto kuwii ka horeeyay, waxaa la joogaa xiligii umada Soomaaliyeed dib u hanan lahaayeen codkooda ayna dooran lahaayeen Xisbiga iyo dadka ay rabaan” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay taageeraan doorashada dhaceysa ayna u soo baxaan sidii ay u dooran lahaayeen xisbiga iyo kooxda ay markaasi rabaan.
Farmaajo ayaana cadeyn in doorashada Soomaaliya ka dhaceysa dhawaan noqon doonto qof iyo cod iyo in kale, waxa uuna cadeeyay Madaxweynaha kaliya in doorashada Soomaaliya ay ku dhaceyso waqtigeeda.
Hadalkan kasoo yeeray Madaxweynaha Soomaaliya ayaa meesha ka saaraya shakigii laga qabay in dib u dhacdo doorashada ay bilooyinka ka harsan tahay iyo shaki kale oo laga muujinayay in dowlada mudo kororsi qorsheeneyso.
MD Farmaajo oo cadeeyay in doorashada dalka dhaceysa ay ka duwanaan doonto kuwii hore was last modified: June 6th, 2020 by Admin
Shiinaha oo Somalia soo gaarsiiyey Agab looga hortago COVID19